Aorian'ny embona, ny embryos dia mamorona lavenona maimaim-poana, andro vitsivitsy taorian'ny fandrosoana. Misy fomba maro samihafa azo ampiasaina amin'ny kolontsaina sy ny lavarangana amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny dingam-pandrosoana mandra-pahatonga azy ireo ho matihanina. Ny iray amin'ireo fomba ireo dia hahomby kokoa raha manomboka amin'ny taham-pahavitrihana avo be. Rehefa ambany ny fahavokarana dia maty ny atody tsy misy atahorana ary mihintsana ny ora 24-48 voalohany, manimba ny sisa amin'ny kolontsaina satria tsy misy fomba azo iainana ny fisarahana ny atody tsy misy atahorana. Eo an-dalam-pandrosoana, manomboka mitsambikina eny amoron-drano ny embryos, saingy manjavona tsikelikely izy ireo rehefa ampiasaina ny toeram-pivarotana lipida ary manomboka milomano izy ireo ary mitondra azy any ambany. Midika izany fa misy teknika mitodika kely tsy misy hafa raha manova ny toeran'ny lavaka ao anaty tsanganana ny rano.
Ny lava-piringa lavalava (Acropora palmata) ao anaty fantsona. Sary © Paul Selvaggio / SECORE International
Amin'ny ankapobeny, ny tetikady dia ny mitazona ny lava amin'ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny kalitaon'ny rano sy ny rano. Ny lava dia azo atao amin'ny toeram-pisakafoanana, fanala na tavoahangy bitika kely raha toa ka voatazona ao anatin'ny hafanana tsara (amin'ny ankapobeny 23-29 ° C na 73-84 ° F ref , fa miankina amin'ny mari-panaingan'ny rivotra eo amin'ny toerana misy anao izany. Ny fanalahidy hitazonana ny kalitaon'ny rano dia ny hitazomana ny lanjany amin'ny haavony ambany (izay mety ho sarotra amin'ny ambaratonga voalohany rehefa mipaika sy mitsambikina eny ambony) ary manadio rano mba hanesorana sela sela. Any am-piandohan'ny taom-pilalaovana ny lavanila, ireo tavoahangy matavy (araka ny voalaza ao amin'ny fampiraisana fizarana) dia azo ampiasaina amin'ny fiovan'ny rano. Rehefa mivoatra sy milomano kokoa ny lavadrano, dia mety ho voasivana ny kolontsaina amin'ny bibilava misy metaly voafetra mba hitazonana ny lavenona. Tavoahangy, tavoahangy vy, fantson-tsofa ary bibilava no fitaovana ilaina rehetra.
Raha misy fitaovana fambolena maromaro kokoa, dia azo ampiasaina amin'ny fanamafisana ny hafanana sy ny filtration ny karazam-boankazo samihafa. Farany, in situ Ny dobo misamboaravoara dia azo ampiasaina mba hahitana marobe an-dalam-pivoarana amin'ny alàlan'ny fitsinjaram-pahefana, saingy misy ny fiheverana maro rehefa misafidy toerana mety ho an'ireny dobo (ohatra: ny kalitaon'ny rano, ny fipoahan'ny onja, ny oram-batravatra, ny masoandro, ny fiarovana ny dobo, sns. ). Ny harato voajanahary, izay miankina amin'ny karazana sy ny haben'ny larva, dia azo ampidirina ao anaty sambo kolontsaina mba hitazonana lavenona raha mamela ny fifanakalozana rano.
Ny fandrosoana ny fivoaran'ny larval dia azo dinihina raha misy ny mikrosopaka misintona. Ny tahan'ny fampandrosoana, ary noho izany ny vanim-potoana mandra-pahavitan'ny lavanila dia hiankina amin'ny karazana karazany sy ny hafanana, satria ny lanjany dia mitombo haingana kokoa amin'ny mari-pamantarana hafiriana. Noho izany, ny fanarahamaso tsy tapaka dia atolotra mandritra ity dingana ity.
Kitiho ny kilalao mba hijery ny volombava vaovao. Video © Anastasia Banaszak.
Rehefa afaka andro vitsivitsy, dia ho vonona hipetraka sy hivoatra ho lasa coral polip ny olitra amoron-dranomasina. Ny fizarana manaraka dia mamaritra ny larval ponenana amin'ny ony sy ny natiora voajanahary.
Mitazona ny mari-panaovana rano mety tsara ary hitazona ny lavenona handevonana ny kalitaon'ny rano.
Ny atody tsy voahasina dia hampidina ny kalitaon'ny rano rehefa mihena izy; Maro ny fiovan'ny rano no ilaina.
Tokony hialana amin'ny fialana amin'ny fanadiovana ny fandroana izany satria hampitombo ny salinity izany.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVideo SECORE - Coral Larvae mitarika fitsangatsanganana ao amin'ny University of Guam